Quaint and Quirky Cafe Yemukati Dhizaini - Dhizaini magazini
Cafe Yemukati Dhizaini
Cafe Yemukati Dhizaini Quaint & Quirky Dessert Imba chirongwa chinoratidza zvazvino zvazvino vibe nekubata kwechimiro chinonyatsoratidza zvinonaka zvinobata. Chikwata chinoda kugadzira nzvimbo inonyatsosarudzika uye vakatarisa kudendere reshiri kukurudziro. Pfungwa yakazouyiswa kuupenyu kuburikidza neunganidzwa wemadhiza ekugara anoshanda sechinhu chepakati che nzvimbo. Chimiro chine hunyanzvi nemavara emakanda ese anogovera anobatsira kuti vagadzire pfungwa yekufanana iyo inobatanidza pamwe pasi uye mezzanine pasi kunyange pavanopa ambiance kubata kwekutarisira-kubata.
Zita rechirongwa : Quaint and Quirky, Vagadziri zita : Chaos Design Studio, Izita remutengi : Bird Nest Secret.
Cafe Yemukati Dhizaini Chaos Design Studio Quaint and Quirky